Buka i-'The Exorcist '1973 Izithameli Zishiya Amatiyetha; Ukukhululeka Ngokuphelele - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Buka i-'The Exorcist '1973 Izithameli Zishiya Amatiyetha; Ngokukhululekile Ngokuphelele
by UTrey Hilburn III June 15, 2021
Umqondisi, uWilliam Friedkin's I-Exorcist wesabe ophi abaphilayo baphuma kubahambi beshashalazi ngesikhathi sokukhishwa kwalo okokuqala kwetiyetha. Le filimu ihlukumeze kakhulu abanye abantu. Ngikhumbula umama wami engitshela ukuthi ngemuva kokubuka I-Exorcist enkundleni yemidlalo, akakwazanga ukulala isonto lonke. Yonke le nto yafika ne-taboo enjalo enamathiselwe kuyo. Wonke umuntu ubebonakala enendaba yakhe eyethusayo ngokwenzekile ngesikhathi noma ngemuva kokuphela kwefilimu.
Ividiyo evela ku- 1973 ifaka izixuku ezilinde olayini abathengisiwe ngaphandle kwamathiyetha. Izixuku zigcina zingene ngaphakathi ukuthola ukuphendula okuningi. Abanye abantu bahamba kusenesikhathi, abanye bazizwa becanuzelelwa yinhliziyo, abanye bazizwa sengathi bebekhohlakele kanti empeleni kukhona ama-hounds asabisayo abecabanga ukuthi ifilimu ibihle.
Ividiyo ye I-Exorcist's izixuku zathunyelwa eminyakeni embalwa emuva kepha kubonakala sengathi ziphinde zaqala ukusakazwa kwegciwane. Ividiyo emnandi okufanele uyibuke futhi iyisithombe esincane esihle somlando womcimbi owesabekayo. Ukukhuluma iqiniso, izethameli bezingagcwele amafilimu asabisayo njengoba ezinye zethu zingenangqondo. Kubo, I-Exorcist kwakungokuhlangenwe nakho okwakungafani nanoma yini abake bayibona ngaphambili. Kuyajabulisa ukucabanga ngakho.
Isililo se-edgelord manje sibonakala sithi “I-Exorcist ayethusi! Kuyahlekisa futhi kuyisiphukuphuku ”ngebheji engakahlonishwa futhi engekho nhlobo yokuba nesibindi ... kodwa kithina sonke sikwazile ukuba nomphumela eminyakeni edlule.
Uneminyaka emingaki ngenkathi ubuka I-Exorcist? Sazise esigabeni sokuphawula.
ILabyrinth ithola ukukhishwa kwe-4K UHD ngeminyaka yayo engama-35. Bheka lapha.
izethameliI-ExorcistUWilliam FriedkinUWilliam peter blatty
I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-6-15-21